Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. थाङ्का आर्टबाट कमाएको पैसाले मुर्ति स्थापना गरे – Janata Live
सोनाम छिरिङ ह्योल्मो
समाज सेवी तथा धर्म गुरू
सोनाम छिरिङ ह्योल्मो सन् १९६७ अक्टोबर १८ मा हेलम्बु निङ्गाले ताक्पाखर्कमा जन्मेका हुन् । थाङ्का व्यवसायमा संलग्न उनी समाजसेवामा पनि सक्रिय छन् । गुम्बा निर्माणमा विशेष चासो राख्ने सोनामले थाङ्का आर्टबाट कमाएको ५० प्रतिशत रकम समाजसेवामा खर्चिदै आएका छन् । थाङ्का आर्टकै क्रममा उनले कास्की, गोरखा, पोखरा, चितवन र भारत लगायतका स्थानमा पुगेर काम गरिसकेका छन् । पाँच कक्षासम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका उनलाई गाउँलेले खेम्पोका रूपमा चिन्छन् । भुटानका बुर्निस मास्टरसँग समेत काम गरिसकेका सोनाम आफ्नो पहिचान र संस्कृति जोगाउने अभियानका साथै सामाजिक कार्यमा पनि लागि पर्ने बताउँछन् । धर्म गुरू सोनामसँग गरेको कुराकानीः
भरखर अमेरिकाबाट आएको केही दिनमात्र भयो । हेलम्बुको सेर्माथाङमा गुरू रिन्पोछेको मुर्ति प्रतिस्थापन गर्दै छु । सम्पूर्ण ह्योल्मोहरूले गुरू रिन्पोछेमा आस्था राख्ने गर्दछ । गुरू रिन्पोछेको मुर्ति प्रतिस्थापन भएको ठाउँमा लामा गुरू बस्नका लागि घर (छम्खाङ) र गार्डेनका लागि तयारी हुँदैछ । विगत एक वर्षअघिदेखि बन्दै आएको हो । मेमे आम्जी गुरू रिन्पोछेलाई बुवाले हेलम्बुमा निमन्त्रणा गरी बोलाएका रहेछ । अहिले यहीँ मुर्ति प्रतिस्थापन गर्नमै व्यस्त छु ।
हेलम्बुमै गुरू रिन्पोछेको मुर्ति प्रतिस्थापन गर्नुको कारण ?
मुख्यतः बुवाले मुस्ताङबाट निमन्त्रणा गरेका मेमे आम्जी गुरू रिन्पोछेमा ठूलो शक्ति छ । हेलम्बु क्षेत्रका बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने अनुयायीहरूलाई थप शिक्षा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले मैले हेलम्बु किउल गाविस–६, ताक्पाखर्कमा गुरू रिन्पोछेको मुर्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न पुगेको हो ।
१३ फिटको मुर्ति प्रतिस्थापन भएको छ, गुरू रिन्पोछेको मुर्तिलाई कसरी पु¥याउनु भयो ?
हो, त्यहाँ पु¥याउन हामीलाई निकै गा¥हो भएको थियो । एक वर्ष अघि मोटर बाटो सडक निमार्ण भएको थिएन । त्यसैले मुर्तिलाई हेलिकोप्टरबाट पु¥याए ।
–हेलम्बु क्षेत्रका बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने अनुयायीहरूलाई थप शिक्षा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले मुर्ति स्थापना गरेको हो
–धेरै मान्छेले अन्दविश्वासमा बुद्धिष्ट धर्मको परिचय दिने गरेको छ । बुद्ध धर्मको सिद्धान्त बुझेको हुँदैन् ।
–मुर्तिप्रतिस्थापन गर्न भन्दा अघि धर्मका नाममा बज्र गुरू मन्त्र जब गर्ने कार्य हुँदैन् थियो ।
–मैले विदेश र स्वदेशमा कमाएको ५० प्रतिशत रकमले काम गर्ने हो ।
तपाइँले गाउँ मुर्ति प्रतिस्थापनमा लगानी गर्नुको उद्देश्य के हो ?
म पनि बौद्ध धर्मको अनुयायी हुँ । अब समय परिवर्तन भएको छ । गाउँठाउँका मान्छेहरू बौद्ध धर्ममा बढी केन्द्रीत भएको पाइन्छ । पहिला–पहिला मान्छेहरु बढी मात्रमा आस्था राख्ने गर्थे । र, बुद्धिष्ट भएको कारणले पनि हो । तर, धेरै मान्छेले अन्धविश्वासमा बुद्धिष्ट धर्मको परिचय दिने गरेको छ । बुद्ध धर्मको सिद्धान्त बुझेको हुँदैन । मान्छेहरुले हजारौं काल्पानिक सोँचाइहरु सोचिरहेको हुन्छ । त्यस वेला मनले शान्ति पाइरहेको हुँदैन । र, सोँच्न पनि सक्दैन् । अहिले धर्म पनि ‘मोर्डन’ भएको छ ।
बौद्ध धर्ममा आस्था राख्ने पाइदैन । र, त्यहाँका स्थानीयहरु गाउँबाट बाहिरिएपछि गाउँको ‘सो’ विग्रन्छ । रिन्पोछेको मुर्तिलाई आकर्षक बनाएर गाउँका मान्छेहरूलाई गाउँ फर्काउनका लागि पनि रिन्पोछेको मुर्ति बनाएको हुँ । ह्ल्योल्मो जातिको संस्कृति नविर्सन र सुधारका लागि यो उद्देश्य अपनाएको हो ।
यो मुर्तिप्रतिस्थापन गर्नका लागि स्थानीयको कतिको सहयोग पाउनु भयो ?
सबैबाट सहयोग पाएको छ । स्थानीयको सहयोगमै मैले मुर्ति प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको हो । उहाँहरूको सहयोग विना काम गर्न सकिदैन थियो । मुर्ति प्रतिस्थापन गर्नुभन्दा अघि धर्मका नाममा बज्र गुरू मन्त्र जब गर्ने कार्य हुँदैन थियो । तर, अहिले वार्षिक रुपमा हुँदै आएको छ । यो प्रचलन गर्न थालेको सात वर्ष भएको छ । स्थानीयले यसलाई सकरात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ ।
काल्पनिक रूपमा सोँच्न नसक्नुको कारण ?
मान्छे सधै व्यस्त हुन्छ । सबैमान्छेमा हजारौं कल्पनाहरू सृजना भइरहेको हुन्छ । र, मान्छेले सोँच्न वाध्य हुने भएकाले मान्छेले सोच्दैन । शान्ति नपाएका बेला सुन्दर रमणीय ठाउँहरु अनि एकान्त ठाउँ भयो भने हामीले सोँच्न सक्छौं ।
त्यस ठाउँमा अरू मुर्तिलाई पनि राख्न सकिन्छ होइन र ?
सकिन्छ, तर ह्योल्मो समुदायले बढी मात्रमा गुरू रिन्पोछेलाई दर्शन गर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएको हो । उहाँहरूले गुरु रिन्पोछेकै पूजाआजा गर्नु हुन्छ । यो गुरू रिन्पोछेको मुर्ति बनाउनुका तीन कारणहरु छन्, शाक्यमूनिकाल पछि रिन्पोछे मान्छेको रुप लिएर आएको, उहाँकै पालामा गुरू रिन्पोछे स्वयम् त्यस स्थलमा आउनु भएको थियो । बुद्ध धर्ममा पनि ४ वटा सम्प्रदायहरु छन्, शाक्य, गेलुक, ञिङमापाहरु हुन् । त्यसमध्ये हामी चाहीं ञिङमापाको अनुयायी भएको कारणले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
हेलम्बु क्षेत्र पर्यटकीय स्थल पनि हो । यो गुरू रिन्पोछेको मुर्तिले झनै आकर्षक बनाएको छ । पर्यटकको ओइरो लाग्ला नि ?
हो, पहिलाको भन्दा अहिले मुर्ति बनाएको ठाउँमा बढी पर्यटकले अवलोकन गर्न थालेको छ । हेलम्बु आफैमा सुन्दर ठाउँ हो । त्यसैले पर्यटकहरू बढी मात्रामा आउने गर्दछ । झन अहिले त हेलम्बु किउलमा सुनमा सुगन्ध झैँ अर्को आकर्षण रिम्पोछेको मुर्ति पनि थपिएको छ । त्यसैले विदेशी पर्यटकमात्र नभएर अहिले स्वदेशका तिर्थयात्रीहरूको आगमन पनि बढेको छ ।
मुर्ति स्थापनाकै लागि अमेरिका जानु भएको हो ?
होइन, मेरा बुवा थाङ्काको आर्ट गर्नु हुन्थ्यो । बुवाले मलाई पनि थाङ्कामै व्यवसायिक बनाउनु भयो । यो बुवाबाटै प्रभावित भएको हो । म स्वदेशमै बसेर थाङ्काको काम गर्दै थिए । नेपालका चर्चित गुम्बा र मन्दिरहरूमा मेरै कला छ । मलाई यहाँ स्वदेशमै राम्रै आम्दानी आउथ्यो । यसैबाट आएको आम्दानीबाट मैले पचास प्रतिशत समाजका लागि छुटाएको छु । थाङ्का आर्ट गर्ने सिलसिलामा अमेरिका पनि पुगेको हो ।
अमेरिका पुगेपछि के काम गर्नु भयो ?
म थाङ्का आर्ट गर्नकै लागि गएका थिए । त्यहाँ थाङ्का र मुर्ति आर्ट गर्ने काम गरे । १५ वर्ष भयो अमेरिका पुगेको । र, म अमेरिकामा मात्र सिमित रहिन । क्यानडा, मेक्सिको, जर्मनी र अस्टे«लियालगायत धेरै देशमा थाङ्का पेन्टिङ गर्ने काम गरे । मेरो कला सबैले मनपराई दिनुहुन्छ । त्यसैले पनि विभिन्न देशहरूबाट सम्पर्क हुन्छ । मेरो विदेशमा आठ महिना मात्र बसाई हुन्छ । अरू वेला त नेपालमै हो ।
कहिले सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ ?
मुर्ति राख्ने काम सकिसकेको छ । त्यसको वरीपरि गार्डेन र स्टेहरू निर्माण हुँदै छ । अझ स्थानीयहरूको सहयोग पाएमा २ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ । यसमा मेरो करोडौको लगानि गइसकेको छ । अभै धेरै पैसाको खाँचो छ । त्यसैले यो चाँडो निर्माण गर्नमा पनि आर्थिक कुरामै निर्भर हुन्छ । अहिलेसम्म जति काम गर्दै आएको छु त्यो मैले विदेश र स्वदेशमा कमाएको ५० प्रतिशत रकमले नै काम गर्दै आइरहेको छु ।
प्रकाशितः २०७१ असार ९ सोमबार